सुजुकीको स्टलमा थामिनसक्नु भीड, एकसय बढी गाडी बिक्री Bizshala -
सुजुकीको स्टलमा थामिनसक्नु भीड, एकसय बढी गाडी बिक्री
काठमाण्डौ । भृकुटीमण्डपमा जारी नाडा शोमा मारुती सुजुकीको स्टलमा थामिनसक्नु भीड देखिएको छ ।
प्रदर्शनको चौथो दिनमा पनि यत्ति भीड देखिनु सुजुकीप्रतिको नेपालीहरुको अगाध माया र स्नेह रहेको कम्पनीका डाइरेक्टर करण चौधरीले बताए ।
बिहीबारसम्मको रेकर्ड अनुसार १ सय भन्दा बढी गाडीहरुको बूकिङ्ग भइसकेको र नाडा अझै ३ दिन बाँकी रहेकोले यो आँकडा अझै माथि पुग्ने सीजी मोटोकर्पका मार्केटिङ प्रमुख करुन शाक्यले बताए ।
बिहीबारसम्मको रेकर्ड अनुसार ३ हजार ५ सय प्लस ईन्क्वायरी रेकर्ड भएको शाक्य बताउँछन् ।
मारुती सुजुकीका चार पांग्रे सवारीमा सिजी मोटोकर्पले ग्राहकहरुको हितलाई ध्यानमा राखी एभरेस्ट, हिमालयन, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायत वाणिज्य बैंकमार्फत ३५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट र ९.९९ प्रतिशत व्याजमा सुजुकी ब्रान्डका गाडीहरू खरिद गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
स्वीफ्ट सोध्नेको उस्तै भीड
नेपालमा चार पांग्रे सवारीको कुल बजार हिस्सामा सबैभन्दा बढी ओगट्दै आएको मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिजी मोटोकर्प हो ।
नाडा अटो शोमा सुजुकीका विभिन्न मोडलहरु राखिएकोमा शोमा डिजायर, बोलेनो, सुजुकी स्विफ्टमा विशेष आकर्षण देखिएको सिजी मोटोकर्पका मार्केटिङ प्रमुख करण शाक्यले बिजशालालाई बताए ।
यीमध्ये पनि स्वीफ्टको पछिल्लो भर्जनले धेरैको ध्यान तानेको छ । थर्ड जेनेरेसनको यस स्विफ्ट कार स्पोर्टि लूक्स र नयाँ च्यासिस तथा थुप्रै आकर्षक विशेषता भएकाले चलाउन आरामदायी रहेको शाक्य बताउँछन् ।
पावरफूल इञ्जिन त छँदैछ नै, यसले ग्यारेन्टीका साथ २२ किमि प्रति लिटरको माईलेज पनि दिने कम्पनीको दाबी छ ।
यस कारको मूल्य २८ लाख ४९ हजार मात्र रहेकोमा अधिकतम २ लाखसम्म ठूलो छूट प्लस स्क्र्याच मार्फत १ लाख नगद छूट रहेको छ र नाडा शोमा कम्पनीको तर्फबाट पनि थप नगद छूट रहेको शाक्य बताउँछन् । उनले भने, नेपाली परिवारका लागि लुक्स, माइलेज, आरामदायी र अन्य विशेषताले स्वीफ्टको पछिल्लो संस्करण उपयुक्त भेइकल हो । यहीकारण अधिकांशको छनौटमा हो मोडल परेको छ ।
सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड, डुअल एअरब्याग एबीएस, पावर विन्डोज, पावर एसी, म्युजिक स्ट्यान्डर्ड र राम्रो च्यासिस भएअनुसार सुजुकी स्विफ्ट कार छोटो समयमै आम नेपालीको रोजाईको कार बन्न सफल भएको शाक्य दाबी गर्छन् ।
विश्व बजारमा तहल्का मच्चाउँदै हाइब्रीड कार, प्रयोगमा छ
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय अटो उद्योगमा हाइब्रिड कारले तहल्का...
काठमाण्डौ । अटो मोबाइल सेक्टर तीव्रगतिमा इलेक्ट्रिक कारले आफ्नो...
फोर्ड कम्पनीका गाडीमा गम्भीर समस्या, बिक्री भइसकेका हजारौं
काठमाण्डौ । फोर्ड इण्डियाको प्लान्टमा उत्पादन भई भारत, नेपाल ...
मेभोक्स हेलमेट बिहीबारदेखि नेपाली बजारमा, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाडौं । नेपाल बजारमा बिहीबारदेखि मेभोक्स हेलमेट औपचारिक रुपमा...
हुन्डईको इलेक्ट्रिक एसयूभी कोना कार लन्च, मूल्य कति ?
नयाँदिल्ली । हुन्डई कम्पनीको बहुप्रतिक्षित इलेक्ट्रिक कार कोनाका...
ज्यागुअर ल्याण्ड रोभरद्वारा विद्युतीय कारको निर्माण
कार निर्माता विश्व प्रसिद्ध कम्पनी ज्यागुअर ल्याण्ड रोभरले आफ्नो...
असार १६ देखि भृकुटीमण्डपमा भेष्पाको वृहत क्याम्प, स्कूटर
काठमाण्डौ । डि–लाईफ स्टाईल्स प्रा. लि.ले विश्वविख्यात ब्राण्ड...
नयाँदिल्ली । तपाइँ बाइक चलाउनुहुन्छ । तर तपाइँकी गर्लफ्रेन्डलाई...